IVilla yeLizwe elikhulu leMbali-Usetyenziso oluKhethekileyo - I-Airbnb
IVilla yeLizwe elikhulu leMbali-Usetyenziso oluKhethekileyo
Fazzano, Toscana, Italy
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKathryn
· Iibhedi eziyi-9
· Amagumbi okuhlambela ayi-5.5
Le yindlu emangalisayo kwaye inkulu kakhulu esanda kuhlaziywa yembali yelizwe embindini welizwe elimangalisayo laseTuscan. Uya kusetyenziselwa ngokukhethekileyo i-villa, igadi kunye nedama lokuzilungiselela ngokwakho.
Amagumbi okulala ama-5, ahlala ngokukhululekileyo abantu abali-12, akukhuthaza ukuba udibane nabahlobo kunye nosapho ukuze uphumle, uhlaziye, uphumle kwaye ubuyele kwindalo, okanye ufumanise le mbonakalo yomfanekiso ikhethekileyo yeposikhadi. Le yiTuscany yokwenyani.
Le ndlu intle yelizwe inomdla wembali, yakha yalikhaya losapho lweqhawe lesizwe uCarlo Del Prete.
Ngoku ihlaziywe ngovelwano emva kwamashumi eminyaka yokungahoyi le villa kwakhona ibonelela ngendawo yokuhlala entle yosapho.
Ilungele iintsapho ezinkulu okanye iintsapho ezimbini ezabelana ngendlu zibonelela ngokurhoxa kubomi obuxakekileyo kwaye zikurhangqe ngendalo kunye neembono ezimangalisayo zale ndawo ingonakaliswanga yaseTuscany. Ilungele ukujonga iilali ezikufutshane, kubandakanya iCinque Terre eyaziwayo, okanye ukuphumla nje egadini ngelixa abantwana besonwabile equleni...
Bonisa zonke 29 izinto onokuzisebenzisa
Le yi-rustic, yasemaphandleni yaseTuscany ngokusemandleni ayo. Kukho into eninzi yokwenza kwiindawo ezijikelezileyo, iidolophu ezimbini ezantsi kwenduli nazo zonke iinkonzo (ibhanki, iposi, uncedo lokuqala, iivenkile ezinkulu, iibhari kunye neekhefi njl.njl) 10-15mins qhuba. Kwakhona into eninzi enomtsalane kwimizuzu nje embalwa ukuya phambili-i-spa yendalo enephuli yangaphandle, imiqolomba yangaphambili, amachibi okuhlambela kwimilambo eyikristale njl.njl.
Ngaphantsi kweyure kwaye ungakhetha kwiimarike, iidolophu ezinkulu okanye indawo yokuthenga, iilwandle ezibandakanya iCinque Terre entle, iintaba, ukuhamba, iindlela zendalo, amaziko emisebenzi ye-zip-wire, ukutyibiliza emkhenkceni kunye nokutyibiliza ngexesha lonyaka. . Kuninzi ekufuneka kwenziwe!!!!
Umbuki zindwendwe ngu- Kathryn
Ujoyine nge- 2011 Agasti
Quiet, calm. Self-employed massage/complementary therapist.
Ndiza kuba lapha ukuze ndikubulise, ndikubonise indlu kwaye ndiqinisekise ukuba uzinzile. Ngokubanzi ndiya kuba kwipropathi eyahlukileyo kwi-hamlet edibeneyo ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna uncedo kodwa ndiya kukushiya kubumfihlo bakho ngaphandle kokuba ucela uncedo okanye ngokulungiselela kwangaphambili.
Ndiza kuba lapha ukuze ndikubulise, ndikubonise indlu kwaye ndiqinisekise ukuba uzinzile. Ngokubanzi ndiya kuba kwipropathi eyahlukileyo kwi-hamlet edibeneyo ngexesha lokuhlala kwa…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R8395